Maitiro ekugadzira kavha yekumashure yeiyo iPhone X yakajeka zvachose | IPhone nhau
Ichokwadi ndechekuti imwe nzira yakaoma kuita uye kuti ini handikurudzire kuzviitira chero munhu. Izvo ndezve kubvarura yekumashure girazi chivharo cheiyo nyowani iPhone X uye kukwenya zvakananga kuti zvinyatsojeka uye ona zvemukati zvikamu.
Kuve neakasarudzika uye yakasarudzika iPhone X inogoneka, asi mutengo wekuibhadharira iri kubva pane yangu maonero ekunyanyisa. Chero zvazvingaitika, iri harisi basa riri nyore kuita, zviri nyore kuita kupfuura zvinofunga vazhinji uye kwete, hatisi kutaura nezvekutsiva girazi rekumashure nerakajeka, tiri kutaura nezvazvo. shandisa girazi rakafanana uye riisiye iri pachena.
Mune ino kesi isu tine vhidhiyo yeanonyatso kuzivikanwa youtuber uyo anoita maitiro aya zvakakwana uye anotiratidza mhedzisiro, hongu, akati wandei mapoinzi anofanirwa kusimbiswa: chishandiso chakarasikirwa zvachose nevimbiso, chakarasikirwa zvachose chitupa chinoita kuti isabatike nemvura uye guruva, pamwe isu tinokwanisa kuchaja iyo mbiri yekumashure kamera kana iyo LED flash sezvazvinoitika kumusiki weiyi vhidhiyo. Aya ndiwo maitiro anoitwa na EverythinkApplePro:
Zvisinei, sezvatinoona muvhidhiyo, ino haisi nguva yekutanga kuti uyu unozivikanwa weububer aite basa iri, achisiya iPhone iine musana mukutarisa pasirese. Iine iyo nyowani iPhone X dambudziko nderekuti kumashure hakuratidze zvakadzama zvemukati sezvo iine aruminiyamu ndiro inoparadzanisa girazi kubva kune zvimwe zvinhu, saka Isu tinongoona iyo coil yeiyo induction charger.
Asi kana uchiwedzera iwo mapikicha anowanikwa kune iFixit, zvinoita sekunge mudziyo uri pachena chose uye mhedzisiro yacho ingave chimwe chinhu chiri nani mune izvi. Chero zvazvingaitika uye sekunyevera kwataita pakutanga kwechinyorwa chino, zvakanakisa kuisa parutivi rudzi urwu rwe «bricolajes» uye tinogona shandisa aya mapikicha anoratidza mukati meiyo iPhone X.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone X » Maitiro ekugadzira kavha yekumashure yeiyo iPhone X yakajeka
12 kugadzirisa Apple inofanirwa kuita muIOS XNUMX